TodoDLS - Bulshada Kubadda Cagta ee aad ugu jeceshahay
🖥️ DLS Wixii kombiyuutarka
En Bienvenido a TodoDLS! Bogga lagama maarmaanka u ah ciyaaryahan kasta oo ka mid ah Kubadda Cagta Riyada (DLS). Sidoo kale, iyada oo aan loo eegin nooca aad tahay DLS jecel: 2020, 2019... Halkan waxaad ka heli doontaa siyaabo aad ku hesho qadaadiicda bilaashka ah, hagaha si aad u horumariso ciyaartaada, lebiskaaga iyo... wax badan oo dheeraad ah! Hoos waxaa ku yaal kuwa ugu muhiimsan, laakiin sii wad akhrinta, sababtoo ah ka dib waxaa jira hagayaal aad u xiiso badan haddii aad rabto! guulayso dhamaan kulamadiina!
Sida loo ciyaaro Dream League Soccer on PC
Labisyada (Qalabka) ee Horyaalka Kubadda Cagta ee Dream League
Ku hel qadaadiic bilaash ah gudaha Dream League Soccer
Cheats for Dream League Soccer: Sida loo noqdo ciyaaryahan ka wanaagsan
Sida Loo Ciribtiro Dib-u-dhaca Kubadda Cagta Dream League
Hagaha Habka Xirfadda Kubadda Cagta ee Horyaalka Kubadda Cagta
Sida Loogu Helo Dheemman Bilaash Ah DLS
Waxaan haynaa wax badan lebis dhamaystiran, oo wata qalabkooda guriga iyo kuwa ka baxsan, iyo sidoo kale calaamado iyo gaashaan. Waxaad arki kartaa dhowr hoos. guji Halkan si aan u aragno dhammaan dirayska aan hayno la heli karo.
Labisyada (Qalabka) iyo Logo Arsenal
Labisyada (Qalabka) iyo Logo ee Atlético de Madrid
Dharka (Qalabka) iyo Logo ee Chelsea
Lebisyada Leicester City (Qalabka) iyo Logo
Labisyada (Qalabka) iyo Logo Liverpool
Labisyada (Qalabka) iyo astaanta Manchester City
Labisyada (Qalabka) iyo Logo of Manchester United
Labisyada (Qalabka) iyo astaanta Real Madrid
ARAG DHAMMAAN direysyada
Waa maxay Dream League Soccer?
Haddii saaxiib kugu casuumay boggan oo aadan si fiican u garanayn waxa ku saabsan Dream League Soccer, waxaan isku dayi doonaa inaan si dhakhso ah kuugu sharaxno.
Kubadda Cagta Riyada waa sheeko-ciyaar fiidiyow ah oo loogu talagalay taleefannada gacanta (Android, iPhone iyo xitaa Windows Phone) oo uu sameeyay istuudiyo Ingiriis ah, oo xaruntiisu tahay Oxford (England), oo loo yaqaan Ciyaaraha Tabashada Koowaad. Nooca ugu dambeeyay ee saga waa DLS 2020, kaas oo la socda isbedello badan oo ku saabsan qaabka ciyaarta iyo habka loo horumariyo.
DLS 2020 waa nooca ugu dambeeya ee saga
Ciyaartan waxa ay ku guulaysatay in ka badan 10 milyan oo la soo dejiyay dukaanka ciyaarta. Google Play iyo ciyaartoyda caanka ah ee kubada cagta sida Gareth Bale, kooxda kubada cagta Spain ee Real Madrid iyo Luis Suarez, ee FC Barcelona.
Laga soo bilaabo nooca DLS 2016, ciyaarta ayaa soo bandhigtay Shatiga FIF Pro si aad ula ciyaarto ciyaartoyga kubbada cagta dhabta ah iyo qaab ciyaartoy badan si aad ula kulanto taageerayaasha kubbada cagta kale.
Haddii aad jeceshahay boggan oo aad rabto inaad la socoto wararkii ugu dambeeyay, waxaad nagala socon kartaa Facebook ama Twitter. Oo haddii aad shaki ka qabtid ama wax su'aalo ah waxaad isticmaali kartaa foomka xiriirka ee dhinaca midigta ama waxaad tagtaa qaybta faallooyinka ee maqaalladayada. Aad baad ugu mahadsantahay booqashada TodoDLS!
TodoDLS waa isha ugu wanaagsan ee macluumaadka wax kasta oo la xiriira ciyaarta fiidiyowga mobilada, Dream League Soccer. Tilmaamihii ugu dambeeyay, talooyinka iyo wararka halkan!